လိင်ဂိမ်းများကိုသင်အွန်လိုင်းကမ္ဘာ၏အပူဆုံးအတွေ့အကြုံများအချို့ကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်အသစ်ညစ်ညမ်းဂိမ်း၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းပါရှိပါတယ်။ အခမဲ့အားလုံးနှင့်သင့်ဘရောက်ဇာအတွက်။ ဒါကညစ်ညမ်းဂိမ်း၏အသစ်စက်စက်မျိုးဆက်ရဲ့အလှတရားပါပဲ။ င်းသည်သင်၏စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်ပိုမိုစွဲငြိဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့ညဉ့်အခါသို့မဟုတ်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဂိမ်းကစားရန်ရွေးချယ်သည့်အခါတိုင်းသင်နှစ်သက်တော်မူဘို့လိုအပ်အံ့သောငှါလူအပေါင်းတို့သည်အဆငျ့ရှိသည်။ သငျသညျအတွင်းစိတ်ဒိုမီနိုထွက်ရရန်ကြိုးစားသည့်အခါများအတွက်ရင်ခုန်စရာနှင့်အချို့သောခံစားရသည့်အခါငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ခေါင်းစဉ်ရှိသည်။, ကျနော်တို့ဆိုလူကိုအုပ်စိုးဖို့အကြောင်းပြချက်ရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာစာကြည့်တိုက်အတူတူထားရန်ကြိုးစားခဲ့ကျနော်တို့တော်တော်လေးကောင်းသောအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်သောအရာချင်ပါတယ်။ ဒီစုဆောင်းမှုကိုမိုက်အောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာဝက္ဘ္ဆိုက္မွာရွိေနတဲ့ဂိမ္းအသစ္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးလည္းျဖစ္ပါတယ္။	လက္ဝါးကပ္တိုင္ပလက္ေဖာင္းမ်ားအဆင္သင့္ရွိေနေသာေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ဤဆိုက္တြင္ဂိမ္းမ်ားကိုသာအသံုးျပဳပါသည္။ သင်အသုံးပြုမည့်မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆိုဤဂိမ်းကိုကစားနိုင်လိမ့်မည်၊၎င်းသည်ကွန်ပျူတာတစ်ခုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ဂိမ်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကိစ္စများရှိလိမ့်မည်သေချာအောင်အိုင်ကွန်နှင့်အန်းဒရွိုက်အပေါ်ဂိမ်းစမ်းသပ်ပြီး။, လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းလိုက်ဖက်မှုအပြင်၊ဤဂိမ်းအသစ်များသည်မှန်ကန်သောလှုပ်ရှားမှုမှတစ်ဆင့်လက်တွေ့ကျသောဂိမ်းကစားခြင်းကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ဇာတ်ကောင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမှတစ်ဆင့်လည်းပေးသည်။ သင်လိုချင်သို့သော်လိင်လုပ်ရပ်များဖျော်ဖြေဖို့လွတ်လပ်မှုရှိသည်အခါ,သင့်ဦးနှောက်ကိုသင်အမှန်တကယ်အစစ်အမှန်အသက်တာ၌သူတို့ကိုလုပ်နေကြောင်းစဉ်းစားစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွေ့အကြုံများဒါအစစ်အမှန်ခံစားရသောများအတွက်အကြောင်းပြချက်ပါပဲ။ သင္တို႔ဟာသင္တို႔ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈအားလံုးကိုျပည့္စံုေစဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းေတြထဲကတစ္ခုကိုေပးၿပီးသူတို႔ကိုတကယ္ေက်နပ္မႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရေစပါတယ္။
ဘယ်အချိန်မှာမဆိုညစ်ညမ်းဆိုက်မှကြွလာသောအခါ,ကောင်းတစ်ဦးတဦးတည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်သင့်သောအရာ. ဒါကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်မှကြွလာသောအခါငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားကြသည်,ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောယင်းအမျိုးမျိုးကိုကြိုက်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏စုဆောင်းမှုနှင့်အတူ,သင်ရှိစေခြင်းငှါစိတ်ကူးယဉ်မဆိုကြင်နာစိတ်တော်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အကြှနျုပျတို့သညျအနိုင်နိုင်ဥပဒေရေးရာသူငယ်နှင့်အတူဂိမ်းများနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့စိတ်ကြိုက်သူတို့ကိုသင်အမြဲရထားလမ်းချင်သောသင်၏တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်ဆရာတူအောင်နိုငျသောမီနာနှင့်ရင့်ကျက်နှင့်အတူဂိမ်းများ။, ကျနော်တို့တောင်မှသင်ကာတွန်း,နဂါးဘောလုံးကနေတောင်ဂျပန်အတွက်လူကြိုက်များဖြစ်ကြောင်းနာဂါသို့မဟုတ်အခြားစီးရီးကနေပူပြင်းတဲ့သင်လိင်ဂိမ်းများကိုဆောင်ကြဉ်း။ ပြီးတော့ငါတို့မှာအနက်ရောင်မုတ်ဆိုးမ၊အံ့ဘွယ်သောအမျိုးသမီးနှင့်အံ့ဩခြင်းနှင့်စကြဝဠာမှအခြားပူပြင်းသောဂိမ်းများရှိသည်။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုလည်းဂိမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်လာမယ့်နေကြသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုခစျြ၌တူခံစားရပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်အမာခံအရေးယူနှင့်အတူဂိမ်းများရှိသည်။ ဂိမ္းထဲမွာရသမွ်ဂိမ္းေတြနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ဇာတ္လမ္းပံုစံနဲ႔ ဂိမ္းေတြရွိပါတယ္။ ကျနော်တို့တောင်မှသင်သည်သင်၏မဟာဗျူဟာများစမ်းသပ်ရန်နှင့်ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်အနိုင်ရခြင်းဖြင့်ညစ်ပတ်ပေရေအမျိုးမျိုးတို့ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ချွတ်ဖဲချပ်နှင့်ပင်ကဒ်စစ်တိုက်ဂိမ်းကိုခံစားနိုင်သည့်အတွက်ကဒ်ဂိမ်းတစ်စီးရီးနှင့်အတူလာကြ၏။ ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းရန်ဤမျှလောက်ပိုပြီးရှိသည်နှင့်သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှကဒီဆိုက်ရဲ့စာကြည့်တိုက်စူးစမ်းလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါဖြစ်နိုင်သည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသည်တစ်ဦးနိုးထ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုစကားထဲသို့သွင်းလို့မရပါဘူး။, ကိုယ္ေတြ႕ပါ။
သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ်ကျနော်တို့ကဒီမှာညစ်ညမ်းဂိမ်းအမျိုးမျိုးရှိသည်နှင့်သူတို့အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးစွဲငြိဖွယ်ရာများနှင့်အပြန်အလှန်လမ်းအတွက်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့မဆိုပိုက်ဆံတောင်းဘယ်တော့မှနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လိင်ဂိမ်းကစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိလှည့်ကွက်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ရုံဆိုက်ပေါ်တွင်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာပူဇော်လျှင်ကြော်ငြာတွေထဲကပိုပြီးအမြတ်အစွန်းအောင်တစ်လမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို႔ခံစားရတဲ့အခ်ိန္တိုင္းျပန္လာမယ့္ပရိသတ္ေတြပိုမ်ားလာလို႔ပါ။ တဖန်ငါတို့သည်သင်တို့ပုံမှန်ဒီစုဆောင်းမှုအသစ်ဂိမ်းထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ပြန်လာပါစေ။